Thread: နျူကလီးယား ဓာတ်ပေါင်းဖိုများ
06-05-2011 08:38 AM
Posts 35	Thanks 39
Rep Power0ွှအစ်ကိုအားပေးနေမယ်ဆက်ပါဦး
Reply With Quote The Following6Users Say Thank You to မတ်သံလုံ For This Useful Post:
chit tee, Dragon Warrior, dudugyi, rolley, zinmaung, ကိုထွန်း 12-29-2011 11:44 AM
Location ဇဗ္ဗူဒီပါ လင်္ကျာတောင်ကျွန်း ...
Posts 429	Thanks 1,429
Thanked 676 Times in 156 Posts
Rep Power 8 အားပေးတယ်ဆိုလို့ .......... အားရှိသွားပါပြီ ... ဒါပေမယ့်လည်း ဘ၀၀မ်းရေးက မနေသာသေးသမို့ မရေးဖြစ်ခဲ့တာတွေအတွက် တောင်းပန်ပါရစေ ...
အခုကစပြီး နောက်ပိုင်းကို ပြန်ရေးပါ့မယ်ခင်ဗျား ...
အများအကျိုး ရွက်သည်ပိုးက ...
ခနိုးခနဲ့ ဆိုကဲ့ရဲ့လည်း .....
မရွဲ့မစောင်း ကိုယ့်လမ်းကြောင်းကို ... .. . စိတ်ကောင်းနှင့်ယှဉ် ... ခရီးနှင်လော့ ... .. .
Reply With Quote The Following 8 Users Say Thank You to Dragon Warrior For This Useful Post:
chit tee, dudugyi, phoelapyae, rolley, William Paul, zinmaung, ကိုထွန်း, ဖိုးတာ 12-29-2011 04:11 PM
Posts 2,799	Thanks 4,153
Thanked 8,389 Times in 1,623 Posts
Rep Power 10 Originally Posted by Dragon Warrior
အားပေးတယ်ဆိုလို့ .......... အားရှိသွားပါပြီ ... ဒါပေမယ့်လည်း ဘ၀၀မ်းရေးက မနေသာသေးသမို့ မရေးဖြစ်ခဲ့တာတွေအတွက် တောင်းပန်ပါရစေ ...
သိုး ကိုတော့ မေးဖြစ်သေးတယ်။ ကိုယ့်ကိစ်စနဲ့ကိုယ်မလာအားတာ နားလည်ပါတယ်ဗျာ။
အခုလို မအားတဲ့ကြားက ပြန်လာရေးမယ်ဆိုတော့လဲ အထူးကျေးဇူးတင်ဝမ်းသာမိပါ၏။
Reply With Quote The Following 8 Users Say Thank You to chit tee For This Useful Post:
Dragon Warrior, dudugyi, rolley, tunaungkyaw, William Paul, zinmaung, ကိုထွန်း, ဖိုးတာ 12-29-2011 08:37 PM
Posts 522	Thanks 1,792
Rep Power 8 တမ်းတပူဆွေး သူနှင့် ဝေး သော် ပြည်ထဲရေးနှင့် ဝမ်းရေးထက် လွမ်းရေးခက် ၏ လို့ ကြားဘူးပါတယ်။ ပြောတော့ဝမ်းရေး ကြားနေရတာကတော့ လွမ်းရေး။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ၀မ်းရေးရော လွမ်းရေးပါ အဆင်ပြေပါစေ ကိုနဂါး။
Reply With Quote The Following7Users Say Thank You to AndrewSway For This Useful Post:
chit tee, Dragon Warrior, dudugyi, rolley, tunaungkyaw, zinmaung, ကိုထွန်း 01-15-2012 07:57 AM
Rep Power 8 Originally Posted by AndrewSway
တမ်းတပူဆွေး သူနှင့် ဝေး သော် ပြည်ထဲရေးနှင့် ဝမ်းရေးထက် လွမ်းရေးခက် ၏ လို့ ကြားဘူးပါတယ်။
သြော် ... ကိုကြီးဆွေ ကိုကြီးဆွေ စကားလုံးတွေက ရင်ကိုလာမှန်ပါရော့လားဗျာ ... အဟီး ... မှန်တာဝန်ခံရရင် ၀မ်းရေးက အဲလောက်မခက်ပါဘူးလေ ... ပြည်ထဲရေးဆိုတာလည်း သူ့ဟာသူ ၀န်ကြီးရှိတာပဲဟာကို ... ဟီး ...
လွမ်းရေးကတော့ ဘယ်ခေါင်းစဉ်အောက်ကို ပြောင်းရမလဲ စဉ်းစားနေလို့ နည်းနည်းတော့ ခက်နေသဗျ ... ဟီဟိ အဟဲ ... လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ လည်ပတ်သွားပြီဆိုရင်တော့ လွမ်းရေးကိစ္စစဉ်းစားမိမယ်ထင်ပါ့ ............... အဟီး ဟီး ဟီး ......
အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါ၏ ... .. .
ပျောက်နေသော နဂါး Hidden Dragon ..............
Reply With Quote The Following6Users Say Thank You to Dragon Warrior For This Useful Post:
chit tee, dudugyi, rolley, William Paul, zinmaung, ကိုထွန်း + Reply to Thread
By နတ္ထိ in forum နျူကလီးယား အင်ဂျင်နီယာပညာ
နျူကလီးယား နဲ့ ပတ်သက်၍
By ကိုဆန်း in forum နျူကလီးယား အင်ဂျင်နီယာပညာ
Last Post: 03-20-2010, 01:12 PM
ကလောမြို့ မနောလှ ဓာတ်ပေါင်းစု စေတီတော် ဖူးမြော်၊ လှူဒါန်း သာသနာပြုခွင့်
By naylashwe in forum ဆွေးနွေးချက်များ
Last Post: 02-03-2009, 03:13 PM